Iqembu leWatchdog Limangalela Ukuphoqa u-UC Davis ukuthi Aguqule Amarekhodi Omphakathi - Ilungelo Lase-US Lokwazi
Iqembu leWatchdog Lifuna Ukuphoqa u-UC Davis ukuthi Aguqule Amarekhodi Omphakathi
UDiana Lambert, Sacramento Bee, Agasti 19, i-2016
Iqembu labathengi lifake isimangalo ngokumelene nabaphathi be-University of California ngoLwesithathu abasola u-UC Davis ukuthi ubamba amarekhodi omphakathi iqembu elidinga ukucwaninga, ngokusho kwesikhalazo esifakwe eNkantolo eNkulu yaseYolo.
Isikhalazo esenziwe yi-US Right to Know, iqembu elingenzi nzuzo “elifuna iqiniso nokusobala ohlelweni lokudla lwaseMelika,” ngokusho kwe-website yalo, lisola ukuthi abasebenzi be-UC Davis abakazifezanga izicelo zabo ze-California Public Records Act, abanye bathumela inqobo nje uma beyi-18 izinyanga ezedlulile.
Umthetho waseCalifornia uvumela izakhamizi, kanye nabezindaba, ukuthi bathole noma bahlole amarekhodi avela ezinhlanganweni zombuso ngaphandle kokubambezeleka okungafanele noma ukuvinjelwa.
"Lawa ngamarekhodi omphakathi akhokhwa ngabakhokhi bentela," kusho uGary Ruskin, ongumqondisi obambisene ne-US Right to Know, kusho uLwesine. “Akunasizathu nhlobo sokubambezeleka kokuphendula unyaka nohhafu. Bafihleni futhi kungani bekufihla? ”